Izingubo zentshaka 2014
Naphezu kweqiniso lokuthi kaningi kubesifazane besimfashini sibona phansi amajackethi, ngezinye izikhathi sifuna ukuphakama nobufazi. Yile nguqulo yezingubo zangaphandle yengubo yomswakama owenzelwe imfashini ka-2014 - isitayela esiyingqayizivele yesitayela, okufanele sibe sekhabethe lazo zonke i-fashionista.
Izingubo zentwasahlobo zabesifazane zango-2014 ziyizibuko zobuntu nesitayela, ngezinye izikhathi ngenxa yokuzikhandla, kodwa ubuhle buhlala njalo yindawo yokuqala yowesifazane wangempela.
Imfashini yengubo yomsakazo ka-2014 iyinhlanganisela yezitayela nezitayela eziningi, okuvela kuzo abaqambi abaye bazikhethela kahle nokuzihlanganisa ngesibindi.
Izitayela zezingubo zentwasahlobo ezithakazelisayo 2014
Kwabaningi bezingubo zentshubezi ezinde zonyaka ngo-2014 zanikeza inqwaba yamacu ahlukahlukene - avela ku-classic afakwe ezinhlobonhlobo zezinkampani ezinamandla kakhulu . Kunzima ukuqonda ukuthi kungani lesi sitayela sibonakala sikhangeleke kakhulu kumuntu wesifazane obuthakathaka - mhlawumbe, ngenxa nje yokuthi umehluko phakathi kwesifazane nesinye isimo.
Uma ukusika kwe-baggy kungesibindi kakhulu kuwe, bese ukhetha isilhouette esingafaneleki esingaphansi. Kubonakala ngelayini lehlombe elingaphansi kanye nemikhono emithathu-ntathu.
Yiqiniso, i-classic ingalokothi ilahlekelwe yizikhundla zayo, ngakho-ke ukukhetha okuwinazo kuyinhlawulo yama-classic yengubo ehlanganisiwe eyokwenza kube khona inani lakho. Ezingubo ezinjalo zangaphandle uyoba yisilinganiso sobuhle nobuhle.
Abesifazane abasebasha befashini bangaluleka amajazi amancane entwasahlobo 2014, okuzobonisa ubuhle bemilenze yakho emincane. Izingubo ezinjalo ngokuvamile zivutha noma zinqunywe ngqo.
Izixazululo zombala nokuhlobisa
Isigqoko se-spring sika-2014 sibonakala ngenani elikhulu lokuhlobisa. Lokhu kungaba izinkinobho, zipper, izikhwama, izigqoko zokuhlobisa, imihlobiso ngamatshe noma ubuhlalu, ezihlukahlukene zokuhlobisa. Amamodeli wangempela wejazi, elihlotshiswe nge-appliqués kanye nezindwangu zokuhlobisa kanye nezinto ezakhiwe.
Esiqongweni sezintandokazi zokuhlobisa ngamakristalu amakhulu, kanye nezinhlobonhlobo zobuhlalu nobuhlalu, futhi zingasetshenziswa ngabanye noma ngokuphelele.
Imiklamo yemifashini yasentwasahlobo ka-2014 yayiyizindlela zokugqoka, lapho imibala emibili noma eminye ehluke ngayo ihlanganiswa - isibonelo, phezulu kwejazi ihluke ne-hem, kanye nemikhono - ngezansi. Futhi lokhu kuqhathaniswa kungaba nombala womabili, futhi ngenxa yokuthungwa kwendwangu.
Izinto eziphathekayo - ekwindla 2014
Izikhwama ezenziwe ngemfashini ekwindla-ebusika 2016-2017
Amamodeli amahle kunazo zonke emhlabeni wonke 2014
Izigqoko ezinamahlombe avulekile 2016
Izitayela eziphathekayo ezembathweni 2014
I-Ombre yezinwele ezimfushane
Umbala wezinwele ombre 2014
Amasongo emfashini 2014
Ukugcoba - Ukwindla ngo-2014
Amajackti asemfashini - ekwindla-ebusika 2016-2017
Amabhuzu - Spring 2014
I-Karl Lagerfeld - iqoqo le-2014
Amabhuzu - U-Fall 2016
Umlingisi u-Amber Hurd ubonakala ngelanga lomshado noSean Penn
Indlela yokwenza izimbali zephepha zokuhlobisa?
Ingabe i-polyamory isimilo esisha sobuhlobo noma isono?
Flower garden umthamo - elula futhi enambitha
Yini ongayidlulisela endodaneni yakhe ngoFebhuwari 23 - imibono nezinketho ezithakazelisayo kakhulu
Yiziphi izinyawo ezingcono?
Ukuzikhandla, noma yini abantu abangcolile abangayenza
I-Monarda (amafutha) - izindawo zokwelapha
Yini okufanele ugqoke izicathulo eziphuzi?
Amathumbu epulasitiki ezingane
Ukungahleleki kwempilo yomkhaya uJennifer Aniston noJustin Teru
U-Adam Levine wabiza ubulili bomntwana wakhe wesibili
Okuqukethwe kwe-iodine kwimikhiqizo
Isihlungi se-pollock ku-batter
Ungakhetha kanjani umgexo entanyeni?
UGeorge no-Amal Clooney bajabulela ngempelasonto yothando eParis